XOG:- Khilaaf ka dhex curtay madaxda madasha oo isku haysta dib u dhigista doorashada dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Khilaaf ka dhex curtay madaxda madasha oo isku haysta dib u dhigista doorashada dalka
Khilaaf baahsan ayaa ka dhex-curtay madaxda madasha wadatashiga Qaran, kuwaas oo isku khilaafsan waqtiga dib loo dhigaayo doorashada 2016-ka oo maalintii shalay lagu waday in guddiga doorashada dadban ee heerka federaal uu shaaciyo xilliga kale ee la qaban doono doorashada.
Madaxdaasi qaarkood ayaa qaba in arrinta doorashada lagu darro muddo laba bilood ah, islamarkaana aanay suurta-gal aheyn in muddo bil ah mar kasta dib loo dhigo xilliga doorashada.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa shaki ka muujiyay waqtiga cusub ee guddiga doorashada dadban uu dalbaday oo muddo bil ah dib loo dhigo doorashada xilka madaxweynaha ee sanadkaan, wuxuuna guddigaasi ka dalbaday inay arrinkaasi ka siiyaan faahfaahin dheeraad ah.
Sidoo kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa la sheegay inuu doonayo in doorashada sanadkaan 2016-ka ay qaadato waqti kale, lana gaarsiiyo doorashada ilaa bisha December ee sanadkaan, maadaama xaaladda haatan lagu jiro aanay saamaxeynin in labada Aqal lasoo doorto waqtiga yar ee muddada halka bil ah oo ay qabsadeen guddiga doorashada.
Ugu dambeyntii, saacadihii ugu dambeysay waxaa socday wada-hadalo oo ay qadka teleefanka ku yeelanayeen madaxda madasha Qaran, iyadoo weli la isku haayo in waqtiga la kordhinayo uu noqdo muddo bil ah ama 2 bilood, waxaase la filayaa in maanta go’aan cusub oo kama dambeys ah arrinkaasi laga soo saaro.